galmudugnews.com » Wareegto Ka Soo Baxday Xafiiska Madaxweynaha Somaliya Oo Dagmo Buuxdo Loogu Aqoonsaday Galinsoor
Home » WARARKA » Wareegto Ka Soo Baxday Xafiiska Madaxweynaha Somaliya Oo Dagmo Buuxdo Loogu Aqoonsaday Galinsoor Wareegto Ka Soo Baxday Xafiiska Madaxweynaha Somaliya Oo Dagmo Buuxdo Loogu Aqoonsaday Galinsoor galmudug on
No Comment Views 162506
Dikreeto ka soo baxday Xafiiska Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Shariif Sheekh Axmed ayaa maanta dagmo buuxdo loogu aqoonsado Dagmada Galinsoor ee Gobalka Galgaduud.
Digreetada ayaa waxaa ay ka soo baxay wasaaradda aarimaha gudaha iyo amniga qaranka iyadoo ay ku lifaaqneed dikreeto kasoo baxday xafiiska Madaxweynaha waxa ayna u qorneed sida tan.
Ku guddoomiyaha gobolka Galgaduud.
Ku dhamaan wasaaradaha xukuumadda FKMG ah.
Ku Taliyaha ciidanka Booliska Soomaaliyeed
Ku taliyaha Nabadsugida Qaranka.
Ujeedo Baafin Dagmo cusub
iyadoo laga amba qaadayo xeerka Madaxweynaha LR. 045, ee 16/02/2012, kuna saabsan magacaabis dagmo cusub, waxaa loo aqoonsaday degmo ahaan degmada Gelinsoor oo ka tirsan gobolka Galgaduud.
Hadaba si loo hormariyo kaabayaasha dhaqaalaha, nabadgalyada, cadaalada IWM ee ay u baahantahay Dagmo, waxaa laga codsanayaa dhammaan hay’adaha dowliga in ay dhameystiraan baahida kaga aadan dagmada Galinsoor, waxaa qoraalkan ku lifaaqan Madaxweynaha ee ay ku soo baxday magacaabistaas.
Xeerka Madaxweynaha J.S Lr,045 Taariikh 16/02/2012 magacaabis dagmo cusub.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda J.S
Markuu arkay qodobka 39aad xarafka “A” iyo farqada labaad ee isla qodobkaan.
Markuu arkay xeerka Lr.6 ee 12ka febraayo 1980
Markuu arkay warqadda wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga qaranka Lr WAG&AQ/XW/0155/12 ee Fabraayo 14/2012 kuna saabsan soo jeedin magacaabid dagmo.
Waxuu soo saaray xeerkan soo socda
Waxaa la ogolaaday in Gelinsoor oo ka tirsan gobolka galgaduud loo aqoonsado dagmo laga bilaabo maanta oo ay taariikhdu tahay 16 febraayo 2012.
Xeerkan waxuu dhaqan galayaa marka uu saxiixo Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ah ee dowladda.
Dikreetada ayaa waxaa ku saxiixnaa Madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya Mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21141 hitsContact US - 19977 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 19488 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 16374 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 16186 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 14874 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 14334 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 14302 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 14004 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 13780 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 12866 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 12650 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 12605 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 12325 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 12067 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11957 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11681 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 11589 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11587 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11577 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11452 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 11308 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11253 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11246 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 11032 hits Home About